Ilhaan Cumar oo ka dalbatay Waaxda Amiga Maraykanka in la baadho fal foolxun oo lagu kacay Dad muslimiin ah - Idman news
Ilhaan Cumar oo ka dalbatay Waaxda Amiga Maraykanka in la baadho fal foolxun oo lagu kacay Dad muslimiin ah
Xildhibaanno ay hoggaamineyso Ilhan Cumar, oo ka tirsan Aqalka Wakiillada Mareykanka, ayaa warqad u qoray Waaxda Amniga Gudaha, iyagoo ka dalbaday in baadhitaan lagu sameeyo dhacdo ku saabsan dad muslimiin ah oo xabsiga dhexdiisa lagu siiyay hilib doofaar.
Falkan waxaa ku kacay Ciidamada Ka hortagga Qaxootiga iyo Canshuur ka qaadista badeecooyinka lasoo dhoofiyo (ICE), sida lagu qeexay war-saxaafadeed ay si wadajir ah ugu saxiixnaayeen wakiillada Aqalka Congress-ka ee kala ah Ilhan Omar, Rashida Tlaib iyo Andre Carson.
Qoraal ay Ilhaan soo dhigtay boggeeda Facebook-ga ayey ku tidhi: “Wax la aqbali karo ma aha warka soo baxay ee ku saabsan in dad muslimiin ah oo ku jira xabsiyada qaxootiga lagu khasbay inay kala doortaan hilib doofaar ama cunto xalaal ah oo qudhuntay. Arrintani waa khiyaanadii ugu dambeysay ee uu Trump ku sameeyay diinta, waxayna xasuusin u tahay bani’aadanimo xumada ka jirta xabsiyada ciidanka Ka hortagga Qaxootiga iyo Canshuur ka qaadista badeecooyinka lasoo dhoofiyo (ICE). Maanta waxaan horseed ka noqday warqad loo diray Waaxda Amniga Gudaha, si tacaddigaas loo soo afjaro.”
Rashida Tlaib iyo Ilhaan Cumar
Dad muslimiin ah oo ku jira xabsiga Krome ee magaalada Miami ayaa lagu soo warray in lagu khasbay inay kala doortaan hilib doofaar iyo raashin xalaal ah oo qudhmay, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ay soo saareen Ilhaan iyo xildhibaannada kale ee ay ka wada tirsan yihiin Aqalka Wakiillada.
“Dhacdadan waxay ka mid tahay eedeymaha ay wajahayaan ciidanka ka hor tagga soo galootiga, kuwaasoo ay ka mid yihiin in maxaabiis yahuud ah loo diiday cuntooyinka loo yaqaanno Kosher-ka iyo waliba xad-gudubyo lagula kacay dad Hinduu ah iyo kuwo Masiixiyiin ah,” ayaa lagu yidhi bayaanka.
“Dalka Mareykanka waxaa lagu dhisay mabaadii dhexdhexaad ka ah diimaha iyo in loo wada siman yahay sharciga,” ayey tidhi Ilhan.
“Dhacdadan laga soo tabiyay Miami waa mid kale oo ku biireysa falalka bani’aadannimada ka baxsan eelagu sameynayo qaxootiga dariskeenna ah, waxaana mas’uul ka ah maamulka Trump,” ayey war-saxaafadeedka dhankeeda ku tidhi Rashida Tlaib.
Waxaa kale oo ka hadlay Andre Carson, oo isagana yidhi: “Eedeymahan ku saabsan xad-gudubka waa kuwo dhibaato aad u weyn leh, waxayna u baahan yihiin in si deg deg ah loo baadho.”
Warqadda lagu dalbaday baadhitaanka ee loo diray Waaxda Amniga Gudaha waxaa kale oo saxiixay wakiillada kala ah: Donald S. Beyer Jr, Judy Chu, Jim Cooper, Madeleine Dean, Ted Deutch, Debbie Dingell, Veronica Escobar, Sylvia R. Garcia, Jahana Hayes, Jared Huffman, Pramila Jayapal, Eddie Bernice Johnson, Marcy Kaptur, Rick Larsen, Barbara Lee, Jerrold Nadler, Eleanor Holmes Norton, Mark Pocan, Ayanna Pressley, Linda T. Sánchez, Jan Schakowsky, Albio Sires, Adam Smith, Juan Vargas, Nydia M. Velázquez, iyo Bonnie Watson Coleman.
Previous Shirkad lacag lagu siiyo inay burburiso qoysaska
Next Mohamed bin Salman oo mar kale qaaday tallaabo ka dhan ah amiiro laga shakiyey